थाहा खबर: शिथिल अर्थतन्त्रको ओदानमा नेपाल: कमजोर उत्पादकत्व, खस्कँदो प्रतिस्पर्धा
शिथिल अर्थतन्त्रको ओदानमा नेपाल: कमजोर उत्पादकत्व, खस्कँदो प्रतिस्पर्धा
दक्षिण एसियाका अधिकांश अर्थतन्त्रले हालैका केही वर्षमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। सन् २०१३ देखि २०१८ मा बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान अनि भुटान र माल्दिभ्सको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि नेपालको भन्दा उच्च रह्यो। अझ सन् २००३ देखिनै हेर्ने हो भने नेपाली वृद्धि चार प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ, जुन हाम्रो विकासको चरणका लागि चरम रुपमै अपर्याप्त हो।
पछिल्लो दुई वर्ष साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान खोजेका छौं। तर त्यो प्रवृत्तिमा दिगो स्रोतको टेकोको भर छैन। कृषि मनसुनमै निर्भर छ। ऊर्जाको सहजीकरणले उद्योग तंग्रिन खोजेको छ, तर त्यहाँ नवप्रवर्तन र गतिशीलता छैन। रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्र र उपभोगलाई बढावा दिएको छ। रियल एक्सचेन्ज रेटको एप्रिसिएसन हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सापेक्षित ह्रास आएको छ।
अहिले विश्वमा दुई ट्रिलियन डलर हो, एफडिआइको वार्षिक आकार। त्यसमा धेरैजस्तो विकसित मुलुकबाट विकसितमै जान्छ। विकसितबाट विकासशील वा विकासशीलबाट विकासशीलमै आउने कम र सीमित छ। त्यसलाई नेपाल ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्र हेरेर हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुक धेरै छन्। तर कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, रुआन्डा, बंगलादेश र धेरै भारतीय राज्यसरहको उदारता त देखिनुपर्छ। अरुभन्दा फरक हुनैपर्छ, आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा।
सन् २००१ देखि २०१४ को तथ्यांकको गहिरो विश्लेषण गरेपछि विश्व बैंकको निष्कर्ष छ– नेपालमा औसत उत्पादकत्व वृद्धि (टोटल फ्याक्टर प्रडक्टिभिटी) शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा छ। शून्य प्रतिशत !
सरल भाषामा उत्पादकत्व वृद्धि भनेको ‘कम समय र लागतमा पहिलेभन्दा बढी र उच्च स्तरको उत्पादन’ गर्नु हो। सन् २०११ देखि २०१६ सम्म अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कुल लगानी २०–२१ प्रतिशत मात्र छ भने प्रचूर प्रगति गरेको बंगलादेशको २५ प्रतिशतभन्दा माथि। हामीकहाँ पुँजी संग्रहको गति सुस्त नै छ। आन्तरिक उत्पादकत्वको कमजोर हालत खस्कँदो बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा झल्कन्छ।
निर्यातको अनुपातमा आयात १२ गुणा ठुलो छ। अर्थतन्त्र बलियो भएको भए आयात बढी हुनु आफैंमा चिन्ताजनक होइन। तर निर्यात नहुनु चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्या हो। आयात बढ्दा उपभोगमा विविधता आउँछ, विकासका क्रियाकलाप बढ्छन्।
विकासको प्रारम्भिक चरणमा पुँजी संग्रह बढाउने खालको आयात बढ्नु राम्रो पनि हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूल हुँदा पनि निर्यात बढाउन नसक्नुमा उत्पादकत्व वृद्धिको अजेन्डाप्रति सरकारी नीति र उद्यमीको निरुत्साह जिम्मेवार छ।
मुलुकमा उत्पादन, कारोबार र व्यापारको लागत उच्च छ। भूपरिवेष्ठित भूमि र उदासीन संस्थागत क्षमताले समस्या चर्काएका छन्। इन्धन, श्रम, ढुवानी, प्रक्रियागत झन्झटले खर्च बढाएको छ।
भारुसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरको पेग छ। यस्तो वातावरणमा उत्पादन र निर्यात बढाउन गहिरा संरचनात्मक सुधारका चरणबद्ध शृंखलाकै आवश्यकता पर्छ। हामीले लागत घटाउन चाहिने सुधार गरेका छैनौं। सरकारले राजस्व संकलनमा केही सुधार ल्याउन खोजेको छ तर त्यसको अधिक हिस्सा संघीयता धान्ने अनुत्पादक चालू खर्चमै सीमित हुने हुँदा लगानीयोग्य पुँजीको बाह्य आकर्षण प्रधान मुद्दा बन्नुपर्नेछ अब।
एउटा सबैलाई समान रुपमा लागू हुने होराइजन्टल र अर्को रोजेरै आकर्षित गर्ने टार्गेटेड पहल। होराइजन्टल नीति आवश्यक हो तर पर्याप्त होइन। नेपालका लागि कम्पनी विशेषलाई टार्गेट गर्ने रणनीति बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाललाई खासै विदेशी लगानीकर्ताले नपत्याइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका अध्यक्ष र राजदूतहरुको तहमा विश्वभर पहिचान भएका केही कम्पनीहरुसँग सोझै सम्पर्क र नेगोसियसन गर्ने। सांकेतिक अर्थमा भन्दा उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने।
हालै डुइङ बिजनेस सूचकांक २०२० मा नेपाल ११०औं बाट ९४औं स्थानमा उक्लियो। विश्व बैंकको यो चर्चित तर विवादास्पद अभ्यासले समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता भने समेट्दैन। दक्षिण एसियामा राम्रो आर्थिक उन्नति गरिरहेको बंगलादेश आज पनि पुछारतिर भेटिन्छ (१६८औं) भने समृद्ध श्रीलंका नेपालभन्दा पछि छ।
हाम्रै आँकडा खोतल्दा दुई साना कुराको ठूलो हात देखियो : पहिलो, गोदाम बनाउँदा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चमा कमी र दास्रो, कर्जा सूचना उपलब्धतामा सहजता। ठूला भ्रष्टाचार, बाह्य लगानी र व्यावसायिक लागत जस्ता महत्वपूर्णपूर्ण कुरा यसले नसमेट्ने हुँदा हामीले गरेको भनिएको सुधार सार्थक भन्दा पनि देखावटी (कस्मेटिक) मात्र भए।
निर्यात बढाउन सबैभन्दा महत्वपूर्णपूर्ण कुरा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो। वैदेशिक लगानीसँग हाम्रा फर्महरु जोडिए भने पैसा मात्र आउँदैन, आधुनिक प्रविधि, बजार र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि आउँछ। एक जमाना थियो सन् ९० को दशक पहिले, जतिबेला भन्सार दर उच्च हुँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र निर्यात एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी थिए। त्यस्तो बेला कुनै ठूला बजारमा निर्यात गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रेर आन्तरिक उत्पादनको रुप लिन्थ्यो। तर विश्व बदलिएको छ। अहिले निर्यात र लगानी परिपूरक भएका छन्।
अर्थात् जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन खुकुलो र प्रतिस्पर्धी नीतिगत संरचना छ, त्यही देशको निर्यात बढ्छ। नेपालकै छोटो अनुभवले पनि यही भन्छ। सन् ९० पछि नेपाल आएर लगानी गरेका डाबर, युनिलिभरजस्ता कम्पनीले यहाँबाट गरेको निर्यात उल्लेख्य रहेको छ।
योसँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा हो– उद्यम र सीपमूलक तालिम। उद्यमशीलतासँग सीप जोडिएको जनशक्ति उपलब्ध गराउने वातावरण हुनुपर्छ। त्यस्तै खोज तथा अनुसन्धान जस्ता टुल्स–– जसले फर्मको उत्पादनदेखि व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा पनि सहयोग गर्छन्–– त्यसको व्यवस्था नेपालमा गरिएको छैन।
तेस्रो, संस्थागत सहजता, सहकार्य र सहयोगको कुरा छ। ब्रान्डिङ, व्यापार प्रवर्द्धन, विदेशी लगानीका लागि एकल एकीकृत सेवा। लगानी बोर्ड यही मर्मका साथ स्थापना भएको हो। तर उसले अझै लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन। बाहिरका केही मुलुकमा ‘नेसनल सिस्टम अफ कम्पिटेटिभनेस’को अनुकरणीय अभ्यास छ। प्रतिपस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन राष्ट्रिय काउन्सिल नै बन्न सक्छन्।
उत्पादकत्वलाई असर गर्ने विभिन्न विषयलाई एकत्रित गरेर एउटा शक्तिशाली संरचना बनाउनु पर्छ। नेपालमा आयोगहरुलाई साह्रै हल्का बनाइयो। तैपनि यो बनाउन सकियो भने ब्रान्डिङदेखि लगानीको वातावरणसम्म, वानस्टप सपदेखि लिएर अन्तरमन्त्रालय सहकार्य, तहगत समन्वय लगायत काम गर्छ।
अहिले औद्योगिक वातावरण बनाउने र व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय त छ, तर यो अर्थ मन्त्रालयको शाखा हो कि जस्तो देखिन्छ। यसले आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरेको देखिन्न।
सन् २०११ मा मैले ‘इन्भेस्टिङ अक्रस बोर्डर्स’ भन्ने रिपोर्टको सह–लेखन गरेको थिएँ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबारे ८७ वटा मुलुकका कानुनी प्रावधान र अभ्यासको विश्लेषण गर्न क्षेत्रगत खुलापन, प्रक्रियागत सहजता, विवाद निरुपण विधि, जमिनको उपलब्धताबारे हजारौं डाटा र २३ वटा सूचकांक केलाइयो। लगानी भिœयाउन नीतिगत व्यवस्था उदार हुनु आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन।
लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरुको व्यवहार निर्णायक देखिन्छ। लगानी बोर्ड जस्तो निकायको अब्बल सशक्तीकरणले प्रारम्भमा केही नतिजा दिनेछ। दीर्घकालमा भने समग्र संस्थागत गुणकै अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ अर्थात् क्वालिटी अफ इन्सटिट्युसन।
लगानी गर्न आउनेले आफूले पाउने कानुनी उपचारको ग्यारन्टी खोज्छ।
कि त ठूलो बजार भएको भारत, चीन जस्ता मुलुक हुनुपर्‍यो। बजारको साइजकै कारण अन्य पाटाहरू सामान्य हुँदै जान्छन्। तर नेपालजस्ता सानो बजार भएका मुलुकमा आउँदा लगानीकर्ताले यस्ता कुरामा पहिलै सुनिश्चतता खोज्छन्।
त्यसपछिका वर्षहरुमा लगानीकर्ताका अन्य चासो पनि केलाइएको थियो। जस्तो कमाएको पैसा विदेश फिर्ता लान कत्तिको सहज छ ? अर्को हो, नेपाल आउने कम्पनीले विशिष्ट सीप र क्षमता भएको जनशक्ति ल्याउने कानूनी व्यवस्था कस्तो छ ? सहज छ कि बन्देज छ ? भिसा, अध्यागमन, श्रम स्वीकृति जस्ता कुरामा कति धेरै व्यवधान छन् ? यी त भए कानुनमा लेखिएका कुरा (डी ज्युरे)। तर व्यवहारमा (डी फ्याक्टो) के छ ? खास महत्वपूर्णपूर्ण कुरा यही हो र सुधारको रेखांकन यहाँबाट सुरु हुन्छ।
नेपालमा भएका विदेशी दूतावासहरुको धारणाको ठूलो महत्वपूर्ण छ। जस्तो अमेरिकी वा चिनियाँ नागरिकले नेपालको लगानी वातावरणबारे जानकारी लिन चाह्यो भने उसको पहिलो खोज अर्थ मन्त्रालय होइन आफ्नै दूतावासबाट हुन्छ। त्यसपछि लगानी गरिसकेका कम्पनीको अनुभव र उनीहरुले खाएका हन्डर वा नाफाको लेखाजोखा हुन्छ।
यसमा दुई तरिकाले सोचौं। एउटा– होराइजन्टल नीति। सबैलाई समान रुपमा लागू हुने। अर्को– टार्गेटेड, रोजेरै आकर्षित गर्न विशेष पहल। होराइजन्टल नीति आवश्यक हो तर पर्याप्त होइन। नेपालका लागि कम्पनी विशेषलाई टार्गेट गर्ने रणनीति बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाललाई खासै विदेशी लगानीकर्ताले नपत्याइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका अध्यक्ष र राजदूतहरुको तहमा विश्वभर पहिचान भएका केही कम्पनीहरुसँग सोझै सम्पर्क र नेगोसियसन गर्ने। सांकेतिक अर्थमा भन्दा उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने।
यसमा इन्टेलको उदाहरण दिन्छु। विगतका दुई दशक चीनप्रति सबैको आकर्षण थियो। तर इन्टेलले भियतनाम रोज्यो। त्यहाँको सरकारले ठूलो सहुलियत दियो र इन्टेलले पनि एक अर्ब डलर लगानी गर्‍यो। यसले अरु कम्पनीमा पनि सकारात्मक सन्देश गयो। इन्टेलजस्तो महान बहुराष्ट्रिय कम्पनीले योग्य ठहर गरेपछि म असुरक्षित हुन्न भन्दै अरू पनि पछि लागे। इन्टेलकै उदाहरण कोस्टारिकामा पनि छ, मलेसियामा पनि।
बढ्दो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धाको जगमा निर्यात र लगानी वृद्धि गर्ने र नेपालभित्रै लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान आजको एकमात्र विकास प्राथमिकता हो। हाम्रो देश यस्तै ‘बिग स्ट्रकचरल ब्रेक’को प्रतीक्षामा छ।
(सेजन स्मारिका 'अर्थनीति २०७६' बाट साभार)
वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।